Wariyihii caanka ahaa ee BBC Soomaali oo ku geeriyooday London | Berberanews.com
Home WARARKA Wariyihii caanka ahaa ee BBC Soomaali oo ku geeriyooday London
London-(Berberanews)-Mid ka mid ah wariyeyaashuu rug-caddaaga ahaa ee ugu caansanaa laanta Afsoomaaliya ee BBC-da ayaa ku geeriyooday magaalada London ee waddanka Ingiriiska.
Axmed Cabdinuur, oo Soomaalidu ay si weyn magaciisa iyo codkiisaba u yaqaanneen ayaa u geeriyooday xanuunka safmarka ah ee Covid-19, sida ay noo xaqiijisay xaaskiisa, Seynab Yaasiin Xirsi, oo qudheeda ka mid ahaan jirtay gabadhaha suxufiyiinta ah.
Kumuu ahaa Axmed Cabdinuur?
Dhammaan suxufiyiintii ay isla soo shaqeeyeen Axmed waxay isku raaceen in uu ahaa qof dabeecad wanaagsan oo dulqaad uu Alle siiyay.
Dhinaca shaqadana uu ahaa mid ka mid ah wariyeyaashii ugu waaweynaa Soomaalida, oo kasoo howl galay Radio Muqdisho iyo BBC.
Axmed Cabdinuur wuxuu magaalada Ceelbuur ku dhashay sanadkii 1955-kii.
Waxa uu wax ku bartay magaalada Muqdisho oo uu uga baxay dugsigii Macallin Jaamac, kaddibna wuxuu dhigtay Jaamacaddii Lafoole.
Sanadkii 1982-kii ayuu ku biiray Radio Muqdisho, kaddibna wuxuu ka mid noqday raggii ugu horreeyay ee lagu billaabay telefishinka Qaranka Soomaaliya.
Howlihii uu kasoo qabtay BBC-da
geerida weriye axmed cali nuur
Kumuu ahaa Axmed Cabdinuur
Previous articleWasiirka Arrimaha Debedda oo dhagaxdhigay Mashaariic Gobolka Sool
Next articleWejigii labaad ee koobka xidhiidhka degmooyinka oo Hargeysa ka bilaabmay